न्यूयोर्क । वैज्ञानिकहरुले खुला सागरको एउटा क्षेत्रमा प्लाष्टिकको थुप्रोमा बस्ने समुद्री जनावरहरु पत्ता लगाएका छन् । वैज्ञानिकहरुले सो क्षेत्रलाई ग्रेट प्यासिफिक गार्वेज प्याच बताएका छन् ।
सो प्याच क्यालिफोर्नियाको तटदेखि पश्चिमी अमेरिकी राज्य हवाइ हुँदै खुला सागरसम्म फैलिएको वैज्ञानिकहरुको भनाई छ । अधिकांश प्राणी तटीय प्रजातिका रहेको र उनीहरु आफ्नो स्वभाविक वासस्थानबाट धेरै माइल टाढा बस्ने गरेको पाइएको छ ।
प्लाष्टिकको ड‌ंगुरको ९० प्रतिशत क्षेत्र एनिमोन, सानो समुद्री किरा, शंखे किरा, गंगटो लगायतका विरुवा र जनावर भेटिएका थिए । प्लाष्टिकहरुले अतिक्रमित जातिलाई आयात गर्न सहयोग गरेको भन्दै वैज्ञानिकहरुले चासो देखाएका छन् ।
अध्ययनमा प्रशान्त क्षेत्रमा तैरिनेदेखि संग्रह हुने स्थानको एउटा चक्रका पाँच सेन्टिमिटरभन्दा बढी व्यासका प्लाष्टिकजन्य पदार्थहरुको जाँच गरिएको थियो ।
अध्ययन समूहका मुख्य अनुसन्धानकर्ता तथा स्मिथसोनियन इनभार्नोमेन्टल रिसर्च सेन्टरका विज्ञ डा. लिन्से हरामले भने, 'तपाइले यसअघि खुला समुद्रमा देखेको प्राकृतिक फोहरभन्दा प्लाष्टिक बढी स्थायी हुन्छन् । यो क्षेत्रमा प्लाष्टिकले एउटा अझै स्थायी बासस्थान सृजना गरेको छ । '
ओसियन भोयज इन्स्टच्युटको सहकार्यमा डा. हारमले अध्ययन गरेका थिए । इन्स्टच्युटले समुद्रमा फालिएका प्लाष्टिकहरु संकलन गर्छ ।
पृथ्विमा कम्तिमा पाँच ओटा प्लाष्टिक स‌ंक्रमित चक्र छन् । ग्रेट प्यासिफिक गार्वेज प्याच सबैभन्दा बढी प्लाष्टिक तैरने चक्र हो । यो चक्रमा ६ लाख १० हजार वर्ग माइलमा ७९ हजार टन प्लाष्टिक तैरिएको अनुमान छ ।